Ihe Ọmụma - Huizhou Olink Technology Co., Ltd.
Ihe omuma banyere ihe eji eme onu ugbo
Automotive wiring njikota
Automobile wiring njikota (ụgbọala wiring njikota) amata njikọ njikọta nke ike ọkọnọ na iche iche eletriki akụkụ na ụgbọala. A na-ekesa eriri ndị na-esi na ya. Ọ bụrụ na ejiri engine ahụ tụnyere obi nke ụgbọ ala, mgbe ahụ eriri eriri bụ usoro ntanetị nke ụgbọ ala, nke na-ahụ maka nnyefe ozi n'etiti akụkụ eletriki dị iche iche nke ụgbọ ahụ.
E nwere ụdị abụọ nke usoro maka n'ichepụta akpakanamde wiring njikota
(1) Kewara site na mba Europe na America, gụnyere China, a na-eji usoro TS16949 achịkwa usoro mmepụta ihe.
(2) Karịsịa na Japan: Toyota, Honda, ha nwere usoro nke ha iji chịkwaa usoro nrụpụta.
Automobile wiring njikota emepụta nwere onwe ha akpan akpan na itinye mkpa ka USB mmepụta ahụmahụ na USB na-eri akara. Osisi ikuku nke ụwa na-ejikarị waya na eriri, dịka Yazaki, Sumitomo, Leni, Guhe, Fujikura, kelop, Jingxin, wdg.
Nkowa mkpirikpi nke ihe ndi ozo maka akwara ugbo ala
1. Waya (obere voltaji waya, 60-600v)
Usoro ọkọlọtọ mba: QVR, QFR, QVVR, qbv, qbv, wdg
Daily marking: AV, AVS, AVSS, AEX, AVX, cavus, EB, TW, she-g, wdg
Akara German: flry-a, flry-b, wdg
Akara America: Sxl, wdg
Nkọwa ndị a na-ahụkarị bụ wires na mpaghara mpaghara ọnụ ọgụgụ nke 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0 square mm
Ọkpụkpụ (shei rọba) na-abụkarị plastik. A na-etinye onye na-eduzi nke ọnụ a na-arụ ọrụ n'ime ya iji hụ na ntụkwasị obi nke njikọ. Ihe omuma a gunyere PA6, PA66, ABS, PBT, PP, wdg
A ekara ngwaike akụrụngwa, nke a na-crimped na waya jikọọ dị iche iche wires ka ebunye n'ókè, gụnyere nwoke ọnụ, nwanyi ọnụ, mgbanaka ọnụ na okirikiri ọnụ, wdg
Ihe ndị bụ isi bụ ọla na ọla (ịdị ike nke ọla dị ntakịrị ala karịa nke ọla), na akaụntụ ọla maka nnukwu ọnụọgụ.
2. Ihe mkpuchi: Mkpuchi mmiri, nkwụnye isi, mgbanaka akara, mkpọchi mkpọchi, nkuku, wdg
A na-ejikarị ya eme ihe iji mepụta njikọ na eriri n'ọbọ
3. Site na oghere roba akụkụ nke eriri waya
Ọ nwere ọrụ nke nkwụsị na-eyi, mmiri na akara. A na-ekesa ya na interface n'etiti igwe na tagzi, interface dị n'etiti ụlọ dị n'ihu na tagzi (aka ekpe na aka nri na mkpokọta), interface dị n'etiti ọnụ ụzọ anọ (ma ọ bụ ọnụ ụzọ azụ) na ụgbọ ala, na tank mmanụ. uzo mmiri.
4. Kee (mkpachị)
A na-eji ihe mbụ, nke a na-ejikarị plastik, ejide njigide eriri waya n'ime ụgbọ ala ahụ. Enwere agbụ, bellows mkpọchi agbatị.
5. Pipe ihe
Kewara corrugated anwụrụ, ịkwanyere okpomọkụ shrinkable anwụrụ, faiba glaasi anwụrụ. Braided anwụrụ, asọfe ọjà, wdg Iji chebe wiring njikota.
Ohaneze, ihe dị ka 60% ma ọ bụ karịa bellow na-eji na njikọ njikọ. Akụkụ bụ isi bụ ezigbo nguzogide akwa, nguzogide okpomọkụ dị elu, ọkụ na-enwu ọkụ na nguzogide ọkụ dị ezigbo mma na mpaghara okpomọkụ dị elu. Nguzogide okpomọkụ nke bellows bụ - 40-150 ℃. Ejiri ihe ya na PP na pa2. PA dị mma karịa PP na ire ọkụ ma na-eyi nguzogide, mana PP dị mma karịa PA na-agwụ ike ọgwụgwụ.
A-function Ọrụ nke ọkpọkọ anwụrụ ọkụ nke PVC yiri nke corrugated pipe. Pipekwanyere anwụrụ ike mgbanwe na ekwe deformation eguzogide dị mma, na ịkwanyere anwụrụ na-adịkarị emechi, otú ịkwanyere anwụrụ na-bụ-eji na alaka ụlọ ọrụ nke njikota gbagọrọ agbagọ, iji mee ka waya ezigbo mgbanwe. Okpomọkụ na-eguzogide okpomọkụ nke ọkpọkọ PVC adịghị elu, n'ozuzu n'okpuru 80 ℃.
Production teepu: ọnya n'elu waya njikota. (kewara n'ime PVC, ogbo teepu, ákwà teepu, akwụkwọ teepu, wdg). Teepu njirimara njirimara: ejiri iji chọpụta ntụpọ nke ngwaahịa mmepụta.
Teepu ahụ na-arụ ọrụ nke njikọta, nkwụsi ike, mkpuchi, ọkụ ọkụ, mbelata mkpọtụ, akara na ọrụ ndị ọzọ na eriri waya, nke na-akọkarị ihe dịka 30% nke ihe ejikọtara ya. E nwere atọ ụdị teepu maka waya njikota: ịkwanyere teepu, ikuku flannel teepu na ákwà isi teepu. Ihe ngosi PVC nwere ezigbo ejiji na ire ọkụ, yana nguzogide okpomọkụ ya dị ihe dịka 80 ℃, yabụ mkpọtụ mkpọtụ ya adịghị mma na ọnụahịa ya pere mpe. Ihe nke flannel teepu na ákwà isi teepu bụ Pita. Teepu flannel nwere arụmọrụ kachasị mma na mkpọtụ mkpọtụ kachasị mma, na nguzogide okpomọkụ dị ihe dị ka 105 ℃; teepu akwa ahụ nwere nguzogide kachasị mma, na nguzogide okpomọkụ kachasị dị ihe dị ka 150 ℃. Ihe ọghọm ndị ọzọ nke teepu flannel na akwa teepu bụ adịghị mma ire ọkụ na ọnụ ahịa dị elu.
Ihe omuma banyere akwara ugboala ugbo ala
Automobile wiring njikota
Automobile wiring njikota bụ isi aru nke ugbo ala circuit network. Enweghị eriri eriri, eriri eletrik agaghị enwe. Ka ọ dị ugbu a, ma ọ bụ ụgbọ ala okomoko ma ọ bụ ụgbọ ala akụ na ụba, ihe nkedo ntanetị bụ otu ihe ahụ, nke nwere wires, njikọ na teepu.
A na-akpọkwa waya na-adọkpụ ụgbọala dị ala, nke dị iche na waya nkịtị. Nkịtị ezinụlọ waya bụ ọla kọpa otu isi waya, na ụfọdụ ekweghị ekwe. Wigbọ ala ndị a bụ ọla kọpa nwere ọtụtụ ihe na-agbanwe agbanwe, ụfọdụ n’ime ha dị gịrịgịrị ka ntutu. Ọtụtụ ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ wires ọla kọpa dị nro na-agbanye na ọkpọkọ plastik (PVC), nke dị nro ma ọ dịghị mfe imebi.
Nkọwa ndị a na-ahụkarị nke wires na eriri igwe na-arụ ọrụ na-agụnye wires nwere mpaghara mpaghara mpaghara 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0, wdg. Nke ọ bụla n'ime ha nwere uru dị ugbu a, nke a na-eji maka wires. nke ngwa ike oriri di iche iche. Were njikota ụgbọ dị ka ihe atụ, akara ngosipụta 0.5 dabara na oriọna akụrụngwa, oriọna egosi, oriọna ụzọ, oriọna oriọna, wdg; Nkọwapụta 0.75 kwesịrị ekwesị maka oriọna ikike, oriọna n'ihu na azụ obere oriọna, oriọna breeki, wdg; 1.0 nkọwapụta akara adabara mgba ọkụ mgbaàmà oriọna, foogu oriọna, wdg; 1.5 nkọwapụta akara adabara headlamp, mpi, wdg; isi akara dị ka generator armature waya, waya waya, wdg chọrọ waya 2.5-4mm2. Naanị nke a na-ezo aka n'ụgbọ ala izugbe, isi ihe na-adabere na uru kachasị dị ugbu a nke ibu ahụ. Dịka ọmụmaatụ, a na-eji waya ala batrị na akara ike dị iche iche maka wires ụgbọala. Arọ waya nke ha bụ nnukwu nnukwu, ma ọ dịkarịa ala ihe karịrị nde iri na anọ. A gaghị etinye wires ndị a "Big Mac" n'ime isi eji arụ ọrụ.
Tupu ị hazie nkedo nkedo, a ga-adọta eserese ntanetị, tupu oge ahụ, nke dị iche na eserese sekit. Ihe nkiri eserese sekit bụ ihe oyiyi na-akọwa mmekọrịta dị n'etiti akụkụ eletriki dị iche iche. Ọ naghị egosipụta otu esi ejikọ ihe eletriki na ibe ya, na nha na ọdịdị nke igwe eletriki ọ bụla na anya dị n'etiti ha anaghị emetụta ya. Ihe osise ntanetị ga-eburu n'uche nha na ọdịdị nke akụrụngwa eletriki ọ bụla na ebe dị n'etiti ha, ma gosipụta otu esi ejikọ eletriki ibe ya.
Mgbe onye ọrụ ntanetị nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-eme ka eriri ikuku ahụ kwekọrọ na eserese ntanetị ahụ, onye ọrụ ahụ ga-ebipụ waya na waya ahụ dị ka ụkpụrụ nke wiwi board. Isi ihe eji eji ụgbọ ala ahụ niile kee ya bụ igwe (mgbanye, EFI, ike ike, ịmalite), akụrụngwa, ọkụ, ntụ oyi, ngwa eletriki inyeaka na akụkụ ndị ọzọ, gụnyere njigide isi na njigide alaka. Ugbo ala akụrụngwa nwere ọtụtụ eriri wiwi, dịka osisi na alaka. Ngwongwo ihe eji eme ihe bu isi ihe nke isi nke ugbo ala nile, nke gbatugoro na azu. N'ihi mmekọrịta dị ogologo ma ọ bụ nzukọ dị mma na ihe ndị ọzọ, a na-ekezi eriri ụfọdụ nke ụgbọ ala n'ime nkịja isi (gụnyere ngwa, injin, nzukọ ọkụ ihu, ikuku ikuku, batrị), azụ azụ (nzukọ oriọna ọdụ, oriọna ikike ikike, akpati oriọna), ụlọ njikota (ụzọ, n'uko oriọna, ụda opi), wdg Ọ bụla na njedebe nke njikota ga-akara nọmba na akwụkwọ ozi iji gosi na njikọ ihe nke waya. Onye ọrụ ahụ nwere ike ịhụ na ihe ịrịba ama ahụ nwere ike jikọọ na wires kwekọrọ na ngwaọrụ eletriki, nke bara uru mgbe ọ na-arụzi ma ọ bụ dochie eriri. N'otu oge, agba waya na-ekewa n'ime otu agba akara na abụọ agba akara. A kọwakwara ebumnuche nke agba, nke bụ ụkpụrụ zuru oke nke onye na-emepụta ụgbọ ala. Industrykpụrụ ụlọ ọrụ China na-ekwupụta naanị agba, dịka ọmụmaatụ, a na-eji otu oji maka eriri waya, a na-eji monochrome na-acha uhie uhie maka akara ike, nke na-enweghị ike ịgbagwoju anya.
Waya njikota na ọbọp na kpara waya ma ọ bụ plastic teepu. N'ihi na nchekwa, nhazi na mmezi mma, kpara waya wrapping e tutu amama. Ugbu a, a na-eji teepu rọba ejiri ya. Njikọ ma ọ bụ lug a na-eji maka njikọ dị n'etiti njikota na njikota na n'etiti njikota na eletriki akụkụ. Ejiri plastik mee njikọ ahụ ma nwee plọg na oghere. Ejiri eriri njikọ jikọta eriri nkedo, na njikọ dị n'etiti njikota na akụkụ eletriki jikọtara ya na njikọ ma ọ bụ lug.
Site na mmụba nke ọrụ ụgbọ ala na ngwa ngwa nke teknụzụ na-achịkwa kọmputa, ihe ọkụ eletrik na-arịwanye elu, ọtụtụ wires, na eriri waya ga-adịwanye ma arọ. Ya mere, ụgbọ ala dị elu webatara nhazi ụgbọ ala CAN, na-eji usoro nnyefe multiplex. E jiri ya tụnyere eriri eriri ọdịnala ọdịnala, ọnụọgụ wires na njikọta na-ebelata nke ukwuu, nke na-eme ka ntanetị dịkwuo mfe.